समुन्द्रको अस्तित्वमा द्वापर युगको ‘एटलान्टिस शहर’ [फोटो फिचर]
बुधवार - पौष २०, २०७३ |
दृश्य: १५९ |
एजेन्सी। भनिन्छ द्वापर युगमा कृष्ण नगरी द्वारका पानीमा डुबेको थियो र अहिले पनि त्यो दरबार समुन्द्रमा उसको अवशेष पाइएको छ। तर भारतको गुजरात प्रान्तस्थित कयाम्बको खाडीमा प्राचीन द्वारका शहर अस्तित्वमा ररहेको पाइएको छ।
भगवान कृष्णले बनाएको द्वारका प्राचीन ठाउँ हो। यहाँ भारतका सात प्राचीन शहरमध्ये एक मानिन्छ। यो शहर एसिया भन्दा पनि ठूलो रहेको थियो जसको नाम एटलान्टिस थियो।
त्यसो त ऐतिहासिक शहर एटलान्टिससँग जोडिएको कहानी धेरै प्रसिद्ध छ। धेरै वैज्ञानिक तथा इतिहासकारहरुले यी घटनालाई यथार्थपरक मानेका छन्। उनीहरुको अनुसार यो ठाउँलाई समुन्द्रले आफ्नो कब्जामा लियो।
एटलान्टिस हराएको शहरयो शहर पुरै समुन्द्रमा डुबेको स्थितिमा रहेको छ। यसलाई इतिहासकारहरुले अहिलेम्म खोजी कार्य गरिरहेका छन्। यो ग्रीक सभ्यताको ऐतिहासिक शहरसँग पनि जोडिएको छ।
एटलान्टिक महासागरमा एटलान्टिस एउटा टापु रहेको थियो। यो शहरभित्र जिक्र यूनान का दार्शनिक तथा गणितज्ञ प्लेटोको कथामा उल्लेख गरिएको छ।
इसापूर्व ३६० अघि प्लेटोले संसारकै सर्वाधिक सभ्य नागरिक सभयताको केन्द्रका रुपमा मानिन्थ्यो। समुन्द्रमा डुबेर एउटा पहेलो वनबाट जाने यो शहरलाई यरोपको केन्द्र पनि मानिएको उल्लेख छ।
अटलान्टिक महासागरमा डुब्योबेला बेलामा इतिहासकारले अटलान्टिस शहर महासागरमा बिलिन भएको प्रमाण दाबी गर्दै आएका छन्।
एउटा चर्चित चार्ल्स बर्लिट्जले पनि आफ्नो किताब ‘द मिस्ट्री अफ एटलान्टिस’ उल्लेख गरेका छन्। उनले यो शहरको बारेमा धेरै रहस्यमयी कुराहरु बताएका छन्।
के हो अटलान्टिक शहरको वास्तविकता ?अहिलेसम्म अटलान्टिस शहरको अस्तित्व दार्शनिक प्लेटोको कल्पना मानिन्छ। धेरै इतिहासकारहरुले यो शहर हुनुको श्रेय यसैलाई भनेर किटान गर्न सकेका छैन। किनकी अहिलेसम्म यो शहरको कुनै पनि अवशेष समुन्द्र सतहमा खोज्‍न सकिएको छैन।
यसको क्षेत्रफल पुरै एसियाको भन्दा पनि ठूलो रहेको बताइन्छ। तर यत्रो ठूलो भूभागको अस्तित्व गुमाउनु परेकोमा आधुनिकताले, विज्ञन प्रविधि र नयाँ नयाँ वैज्ञानिक खोजले पनि पत्ता लगाउन भने चुकेका छन्।
के समुन्द्रले विशाल शहरले निल्‍न सक्छ ?
प्लेटवको कहानी पनि अटलांटिक महासागर जुन भागमा यसको अस्तित्व रहेको दाबी गरिएको छ। त्यहाँ त्यति धेरै ठाउँ नै नभएको खोजकर्ताहरुले बताउका छन्।
तर के समुन्द्रले यो विशाल क्षेत्रफल ओगटेको शहरलाई आफूमा विलिन गर्न सक्छ? भन्‍ने प्रश्न पनि खडा भएको छ। यो विषय अहिले पनि सबैको चासो र खोजीमा रहेको छ।
शनिवार - आषाढ १०, २०७४